လွတ်မြောက်နယ်မြေကနေ အမေစုအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးပို့လာတဲ့ အလှမယ် ထားထက်ထက်…. – Shwe Thadin
လွတ်မြောက်နယ်မြေကနေ အမေစုအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးပို့လာတဲ့ အလှမယ် ထားထက်ထက်….
မော်ဒယ်လ် ထားထက်ဟာ လတ်တလော လူမှု့ ကွန်ယက်တွေ မှာ ပြည်သူတွေ ချီးကျူးတာ ကို ခံနေရတဲ့ အနုပညာရှင် တွေထဲမှာ တစ်ယောက် အပါဝင် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အာဏာ သိမ်းပြီး တဲ့ နောက်ပိုင်း ကနေ စတင်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကို ပြန်လည်ရရှိ ဖို့အတွက် ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ လမ်းမ ပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြ လူထုလှုပ်ရှားမှု့ တွေမှာ အားတက် သရော လုပ်ဆောင် ပေးခဲ့ ပါတယ်။
လက်ရှိ မှာတော့ ထားထက်ထက် ဟာ အနုပညာရှင် တစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်းတဲ့ တောတောင် တွေထဲမှာ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး စစ်သင်တန်း တက်ရောက် ကာ တော်လှန်ရေး လမ်းကို လျှောက်လှမ်း နေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။ယခုလည်း အမေစုရဲ့ (၇၆) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အတွက် ဆုတောင်း ပေးထား တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် အချုပ် အနှောင်ခံ ပြီးမှ ရခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ အလင်း စကစ တစ်စုကြောင့် ဆိတ် သုဉ်း ခဲ့ ပြီ အမေ…ခေတ် က ပေးတဲ့ တာဝန် ကျွန်မတို့ ယူနေတယ် အမေ…အမေ ပြောဖူးသလိုပေါ့ …ကြောက်နေလျက် နဲ့ လုပ်သင့် တာကို လုပ်နေပါတယ်… အမေ့ဆုံး မစကား အတိုင်း စိတ်အား ထက်သန်စွာ နဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ဘယ်လောက် များများ ရင်ဆိုင်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားပါတယ် အမေ…
အမေရေ…..ကျွန်မတို့ အားလုံးက တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးနော်… ဒါပေမယ့် တစိတ်ထဲ တဝမ်းထဲ…..အမေ ပြန်လာမှ နမ်းမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင်းဆီအားလုံး ရင်ဘတ်မှာ သွေးစွေး နီ လျက်ပါ အမေ…ကျွန်မတို့ ပြန်ဆုံကြမယ်နော် အမေ စု…ကျန်းမာ အသက်ရှည်ပါစေ ကျွန်မတို့တွေအားလုံး အတူရှိနေပါတယ်……Happy Birthday အမေစု ..June 19 2021….. လို့ရေားသားဖော်ပြပေး ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလည်း သိရှိစေရန် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သော နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ေမာ္ဒယ္လ္ ထားထက္ဟာ လတ္တေလာ လူမႈ႕ ကြန္ယက္ေတြ မွာ ျပည္သူေတြ ခ်ီးက်ဴးတာ ကို ခံေနရတဲ့ အႏုပညာရွင္ ေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္ အပါဝင္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ အာဏာ သိမ္းၿပီး တဲ့ ေနာက္ပိုင္း ကေန စတင္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ကို ျပန္လည္ရရွိ ဖို႔အတြက္ ျပည္သူေတြ နဲ႔ အတူ လမ္းမ ေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵျပ လူထုလႈပ္ရွားမႈ႕ ေတြမွာ အားတက္ သေရာ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ ပါတယ္။
လက္ရွိ မွာေတာ့ ထားထက္ထက္ ဟာ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ေတာေတာင္ ေတြထဲမွာ ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး စစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ ကာ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္း ေနတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။
ယခုလည္း အေမစုရဲ႕ (၇၆) ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ အတြက္ ဆုေတာင္း ေပးထား တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ အခ်ဳပ္ အေႏွာင္ခံ ၿပီးမွ ရခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ရဲ႕ အလင္း စကစ တစ္စုေၾကာင့္ ဆိတ္ သုဥ္း ခဲ့ ၿပီ အေမ…ေခတ္ က ေပးတဲ့ တာဝန္ ကြၽန္မတို႔ ယူေနတယ္ အေမ…အေမ ေျပာဖူးသလိုေပါ့ …ေၾကာက္ေနလ်က္ နဲ႔ လုပ္သင့္ တာကို လုပ္ေနပါတယ္… အေမ့ဆုံး မစကား အတိုင္း စိတ္အား ထက္သန္စြာ နဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ား ရင္ဆိုင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ ထားပါတယ္ အေမ…
အေမေရ…..ကြၽန္မတို႔ အားလုံးက တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ဘူးေနာ္… ဒါေပမယ့္ တစိတ္ထဲ တဝမ္းထဲ…..အေမ ျပန္လာမွ နမ္းမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင္းဆီအားလုံး ရင္ဘတ္မွာ ေသြးေစြး နီ လ်က္ပါ အေမ…ကြၽန္မတို႔ ျပန္ဆုံၾကမယ္ေနာ္ အေမ စု…က်န္းမာ အသက္ရွည္ပါေစ ကြၽန္မတို႔ေတြအားလုံး အတူရွိေနပါတယ္……Happy Birthday အေမစု ..June 19 2021….. လို႔ေရားသားေဖာ္ျပေပး ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုလည္း သိရွိေစရန္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံးလည္းသာယာေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ေန႔ေလးကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
လေယာဉ်ပစ်လောင်ချာဝယ်လှူချင်လို့ ရည်စူးပြီးထိုင်းထီမှ ဘတ်သိန်း ၁၂၀ ပေါက်တဲ့ မြန်မာလုပ်သား
ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့အမေစုရဲ့(၇၆)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို သတိတရနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ နေရွှေသွေးအောင်